Erling Haaland oo u duulay dalka Jarmalka si uu wadahadal ula galo Kooxda… – Gool FM
Erling Haaland oo u duulay dalka Jarmalka si uu wadahadal ula galo Kooxda…
Haaruun December 12, 2019
(Yurub) 12 Dis 2019. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahan Erling Haaland ayaa u duulay dalka Jarmalka si uu wadahadal ula galo koox ka dhisan dalkaasi.
19-sano jirkaan waxaa doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa ugu waa weyn qaaradda Yurub, laakiin waxaa la soo sheegayaa inuu u duulay magaalada Dortmund si uu wadahadallo ula galo kooxda ka dhisan magaaladaas.
Sida uu warinayo Ruhr Nachrichten, Weeraryahanka kooxda RB Salzburg ee Erling Haaland ayaa u safray dalka Jarmalka si uu wadahadal ula yeesho kooxda Borussia Dortmund.
Da’yarkan weerarka ka dheela ayaa dhaliyey 28 gool 22 kulan oo uu u saftay kooxda reer Austria xilli ciyaareedkan, waxaana la la xiriirinayey kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub.
Dortmund ayaa ah kooxdii ugu dambeysay ee la la xiriiriyo 19-sano jirka, kaasoo la sheegay inuu u duulay gobolka ay ka dhisan tahay Borussia si uu ugala hadlo suurtogalnimada heshiiska uu ugu wareegi karo kooxda ka dheesha Bundesliga.
16-ka Kooxood ee iska xaadiriyey wareegga bug-baxa Champions League & Wax waliba oo aad uga baahan tahay isku aadka tartankan
Atletico Madrid oo diyaar u ah inay iska iibiso Thomas Lemar & Kooxihii doonayey ee Arsenal iyo Liverpool oo xaaladda kor kala socda